इपिएस परीक्षा : नेपालले पायो २०२१ का लागि ५ हजार ४०० कोटा – Eps Sathi
April 12, 2021 1379
दक्षिण कोरियाको मानव संशोधन विभाग (एचआरडी)ले सन् २०२१ मा नेपालका लागि पाँच हजार ४०० जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले एचआरडीले निर्धारण गरेको यो सङ्ख्या लग्ने सङ्ख्याभन्दा पनि भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्णका लागि निर्धारण गरेको हो । एचआरडीले सन् २०२१ का लागि ५२ हजार विदेश श्रमिक लैजाने गरी कोटा निर्धारण गरेकोमा नेपाललाई यो सङ्ख्या परेका हो । यो विश्वका विभिन्न १६ देशका लागि छुुट्याइएको कोटा हो ।
नेपालबाट सन् २००८ देखि कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया लग्दै आएको छ । कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशमा कोरोना भाइरसका कारण सन् २०२० मा कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेन । रातोपाटीबाट साभार
Prevखुशीको खबर, कोरियाका नेपालीले थप १ बर्ष भिजा पाउने
Nextनयाँ प्रायोजक सहित नेपाल क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक, कस्तो लाग्यो जर्सी?
कार्तिक ४ गतेबाट सामलिङ पावर कम्पनीको आइपिओ खुल्दै, कति दिने आवेदन?
तीन अर्बको आइपिओ सहित काठमाण्डौ रि इन्सोरेन्स खोल्ने तयारी